चीन रंगीन चाँदी अंकित पासा सेट निर्माण र कारखाना | टियानकी
खेल फ्यानको जीवनमा असाधारण क्षणहरू छन्। जब पासा हातमा समात्छ वा खेल तालिकामा घुमाइन्छ, प्रत्येक बच्चाले चम्किलो रंगीन प्रकाश निकाल्छ, जुन धेरै आँखा चिम्लिने छ। यसले ड्रेगनको जीतमा विश्वास बढाउँदछ। तिनीहरू भाग्यको पवित्र उपकरण हुन्। तिनीहरू अहंकारी ड्रेगनहरू जस्ता छन्, खेल संसारको प्रत्येक कुनामा रोमि better्ग गर्ने, खेल प्रशंसकहरूको मनपर्ने शौकलाई राम्रोसँग आकर्षित गर्ने।
पासाको सामग्री राल हो। पासा चारैतिरबाट देख्न सकिन्छ अद्वितीय रंगीन प्रकाश दिन। पासाका सुन्दर रंगहरूले मुख्य पोइन्टको रूपमा डिजाइनको प्रवृत्तिमा चित्रण गर्दछ।
बैजनी अरोरा कालो साँझ माथि तैरन्छ, यो अरोड़ा राजकुमारले जस्तै जसले यस सुन्दर सपनाको सिर्जना गर्‍यो।
पारदर्शी प्लास्टिक बक्सले सुसज्जित, यसले यसको उच्च-अन्त लक्जरी शैली हाइलाइट गर्दछ, जुन हाम्रो अधिकारको लागि योग्य छ।
पासाको संख्या आवश्यक:
पासाको उद्धरण पासाको मात्रामा निर्भर गर्दछ। उदाहरणको लागि, १०० सेट र १००० सेट बीचको मूल्य फरक हुनेछ, त्यसैले हामीलाई अनुमानित मात्रा दिनुहोस्, हामी एक राम्रो उद्धरण गर्न सक्दछौं र तपाईंलाई राम्रो गुण सेवा प्रदान गर्न सक्दछौं।
कृपया याद गर्नुहोस् कि रंगमा प्रस्तुत गरिएको दृश्य केवल चित्रण मात्र हो। तपाईंको स्क्रीनमा हेरिएको रेन्डरिंग र चित्रहरूको रंग तपाईंको स्क्रिनको क्वालिटी, उपकरणको व्यक्तिगत सेटिंग्स र अन्य कारकहरूमा निर्भर हुन सक्छ। अन्तिम उत्पादनको र्ग तपाईले स्क्रीनमा देख्नुहुने भन्दा केही फरक हुन सक्छ, तल हाल उपलब्ध र currentlyहरूमा हेर्नुहोस्, यदि तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ भने, अधिक जानकारीका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
उत्पादको विशिष्टताहरू D4, D6, D8, D10, D10%, D12, D20 हुन्, जस मध्ये धेरै जसो बोर्ड गेम डन्जियन्स र ड्र्यागनमा प्रयोग हुन्छन्। उत्पादन प्रक्रिया निम्नानुसार छ: पहिले मोल्ड, त्यसपछि र mod्ग मोडुलन, र त्यसपछि पोलिश र पॉलिश। त्यसपछि बाँकी सतहमा खोपनुहोस्, र अन्तमा र color र हवा सुख्खा। यो सम्पूर्ण उत्पादन प्रक्रिया हो।
संयुक्त राज्य अमेरिकाका क्रिस्टियन कुकलाई यस पासा एकदमै मनपर्दछ। पहिलो अर्डर 50० भन्दा बढी सेट गरिएको छ। सामानहरू प्राप्त गरेपछि, उनले a-स्टार रेटिंग पनि छोडे। पासाको गुणस्तर निकै राम्रो छ, जसले ग्राहकहरू हामीमा चासो राख्दछन् भनेर देखाउँदछ।
चाँदीको रंगीन पोइन्ट पासाको मनपर्ने। र अष्ट्रेलियाई ग्राहक विल स्पूनर-एडी हाम्रो नयाँ चाँदीको रंगीन पोइन्ट पासामा धेरै चासो राख्दछन्। छोटो छानबिन पछि, हामीले तुरून्त पासाका sets० सेटहरू अर्डर गर्यौं, र त्यसपछि तिनीहरूलाई अनुकूलित पारदर्शी बक्समा प्याक गर्यौं। तल दिइएका टिप्पणीहरूले देखाउँछन् कि पासाको गुणस्तर र सेवा एकदम राम्रो छ।
के तपाईंको पासा हस्तनिर्मित छ?
उत्तर: हो, किनारहरू तीक्ष्ण छन् र पासाको बनावट धेरै राम्रो छ भनेर सुनिश्चित गर्न हाम्रो पासा म्यानुअल रूपमा पालिस गरिएको छ।
तपाईं पासा अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ?
उत्तर: पक्कै पनि, हामी पासालाई अनुकूलित गर्न सक्छौं, र हामी पासामा कुर्सी लोगो छाप्न वा प्रिन्ट गर्न सक्दछौं। कस्टम पासा बनाउन सकिन्छ।
विज्ञापन नारा: केहि गर्न सकिदैन, केवल अप्रत्याशित!
अघिल्लो: रंगीन सुनौलो पोइन्ट पासा सेट
अर्को: सकुरा गुलाबी धार पासा सेट
बैजनी सुनौलो अरोरा पासा सेट
रंगीन सुनौलो पोइन्ट पासा सेट
गुलाबी र निलो पोइन्ट पासा सेट